रवि लामिछाने थुनामा पर्दा करिश्मा खुशी ! « रिपोर्टर्स नेपाल
रवि लामिछाने थुनामा पर्दा करिश्मा खुशी !
प्रकाशित मिति : 2019 August 17, 11:08 pm
काठमाडौं, ३२ साउन । न्यूज २४ टेलिभिजनका पत्रकार रबि लामिछाने यतिवेला प्रहरी हिरासतमा छन् । आफ्ना पूर्व सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा लामिछानेसहित तीन जनाको नाम मुछिएपछि उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । लामिछानेसहित तीन जनालाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले हिजो शुक्रबार आदेश दिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिताले आत्महत्या दुरुत्साहनलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दाकै अंग मानेको छ। आत्महत्या दुरुत्साहन अभियोग पुष्टि भए प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा नै अघि बढाउँछ। आत्महत्या दुरुत्साहनमा पाँच वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । पुडासैनीले चितवनको कंगारु होटलमा साउन २० गते आत्महत्या गरेका थिए। पुडासैनीले भिडियोमा लामिछानेले आत्महत्याका लागि बाध्य पारेको बताएका थिए।